Novakiany bantsilana ireo afera maizina ataon’ity depiote ity, kanefa dia sahin’ny “assistant parlementaire”-ny no nilaza fa i Paolo Raholinarivo no lehiben’ny dahalo tany Betroka. Hampanaovy fitsapana ny vahoaka hoe manana fitokisana amin’io dipiote io ve taorian’ny nahatrarana vanja be dia be tany amin’ny olona akaiky azy tany Betroka, hoy i Paolo Raholinarivo. “Hangataka fanadihadiana parlemantera izahay hoe : avy aiza ny harenan’ity depiote ity ?”, hoy izy.
Afera maloto sy tsindritsindry isan-karazany
Izao vao mazava fa ny vahoaka no milaza, ary efa misy sahy mijoro vavolombelona fa avy amin’ny depiote voafidy tao Betroka ny asan-dahalo, hoy i Paolo Raholinarivo. Voalazan’ny fampitam-baovao marobe ary tsy atahorako intsony ny milaza, fa atao ao anaty vilany ilay zaraina, atao ao anaty fitaovana fanamafisam-peo ny basy vaovao atakalo rongony satria manao aferan-drongony ihany koa ireo olona ireo, hoy izy. Hangatahin’io depiote io hosoloina ny kaomandin’ny vondron-tobim-paritra sy ny komandan’ny kaompania Betroka. “Mitodika amin’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria hoe i Nicolas Randrianasolo ve no DRH, ka afaka hanome baiko amin’ny hanesorana ny Lehiben’ny zandary manao fanadihadiana momba io depiote io sy izahay endrikendrehana”, hoy i Paolo Raholinarivo. Efa maro ny mpitandro ny filaminana maty tany an-toerana. Avelao ho vita ny ankety fa ireo no tsy azony baikoana toy ny mpiasam-panjakana ao Betroka. Sokafy ny fanadihadiana momba ahy. Firy ny omby nampangalariko, firy ny vanja,… dia ataovy koa ny azy, hoy izy. Izahay tsy hanaiky ary tsy maintsy migadra io. Tsy hijanona aho raha tsy miditra am-ponja ireo olona ireo, hoy hatrany izy. Rehefa tsy hampiharina amin’ny alalan’ny fisamborana ara-dalàna io, dia hapetraka ny dina satria hametraka fitoriana amin’ny dina ihany koa ny tenako, hoy hatrany i Paolo Raholinarivo. Mitaky hanesorana ny zo tsy azo henjehina “immunité parlemantaire” ananan’i Nicolas Randrianasolo ny tenany. Ny hoe miady an-trano ny samy mpitondra, dia miara-miasa amin’ny mpitondra fa tsy miray tsikombakomba amin’ny famonoana olona, fanondranana omby, fibodoana tanin’olona …, hoy izy. Efa maloto loatra isika ato anatin’ny fitondrana, ka hataonay lisitra amin’izay ireo olon-dratsy ao. Ny 80%-n’ireo olona notendrena ireo dia jiolahy, mpanao afera daholo. Aza manaiky baikon’iza na iza fa izay tratra dia tratra, hoy ny hafany miantefa amin’ny filoha sy ny praiminisitra. Nambarany fa akaiky ny 2018, ka fafao ny trano.